ပုရိသတွေ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားစေမယ့် Xmue Xmue ရဲ့ ဆက်ဆီကျ လွန်းတဲ့ ဗီဒီယို – Zartiman
photo model အမှူး ကတော့ ယခုမှာ အသည်းယား လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်အမှူးရဲ့ ကြွေလောက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှ ပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အမှူး က လက်ရှိမှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိပြီး ချစ်စရောကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူ ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
ယခုအခါမှာ လည်း ပိုက်ဆံရှိဖို့မ လိုဘူးမောင်လေး ရှိရင်….အမှိုက်ကောက်ရလဲ ဖစ်တယ်နော် ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလေ့ရှိပါတယ်။
photo- Xmue Xmue
photo model အမှူး ကတော့ ယခုမှာ အသညျးယား လောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးနတေဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ရငျကို လှုပျခပျသှားစခေဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနခေဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျ တှကေို အခဈြတှေ ပိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျအမှူးရဲ့ ကွှလေောကျစရာ ကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှ ပနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
အမှူး က လကျရှိမှာ အောငျမွငျ လကျြ ရှိနတေဲ့ photo model တဈယောကျဖွဈပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျ ယကျစာမကျြနှာထကျကို တငျပေးလရှေိ့တဲ့ သူပဲ ဖွဈပါတယျ။အမိုကျစားဖကျရှငျလေးတှေ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးတှေ ကို ဝတျဆငျလေ့ ရှိပွီး ခဈြစရောကာငျးလှနျး တဲ့ အပွုံးလေးတှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူ ထားနိုငျခဲ့တဲ့ photo model တဈယောပဲ ဖွဈပါတယျ။.
ယခုအခါမှာ လညျး ပိုကျဆံရှိဖို့မ လိုဘူးမောငျလေး ရှိရငျ….အမှိုကျကောကျရလဲ ဖဈတယျနျော ဆိုပွီး ပုံလေးတှကေို မြှဝထေားတာ ဖွဈပါ တယျ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုရော မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုပါ အခိုငျအမာရယူ ထားနိုငျ ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှရေဲ့ ရှကေို့ ခပြွလရှေိ့ပါတယျ။
နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ အမိုက်စားအလန်းစားVIDEO
ပုရိသတွေ မကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင် ဆက်ဆီ ကျကျပုံစံနဲ့ TIK TOK ဆော့နေတဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း(VIDEO)
ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို အမိုက်စားပို့စ်ပေးနေ တဲ့ သံစဉ်မောင်
အကြမ်းစား ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီး အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး